လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသို့ Yokogawa Electric Corporation Japan ကုမ္ပဏီမှ DCS Plant Model ဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်း
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၂၆ ) ရက်
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံသားပိုင် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် SMART Measurement & Control Co.,Ltd ၏ မိတ်ဖက် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Yokogawa Electric Corporation Japan ကုမ္ပဏီမှ DCS (Distributed Control System) Plant Model ဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း များ ပေးအပ်လှူဒါန်းသည့် အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီအချိန်တွင် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၇)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးများ ဖြစ်ကြသည့် ဒေါက်တာထွန်းနိုင်နှင့် ဉီးခင်မောင်ဝင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Suphatra Srimaitreephithak ၊ Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd မှ Deputy Managing Director, Mr. KoJi Komatsu ၊ Yokogawa (Thailand) Ltd. မှ Managing Director , Mr. Prechai Trannitad ၊ Chief Representative Officer, Mr. Niwat Weeragul ၊ SMART Group of Co.,Ltd မှ Chairman ဦးကျော်ကျော်လှိုင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ကြပါသည်။
ရှေးဦးစွာ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာထွန်းနိုင်က ကျေးဇူးတင် နှုတ်ခွန်းဆက် စကား ပြောကြားပြီး Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd မှ Deputy Managing Director, Mr. KoJi Komatsu နှင့် Yokogawa (Thailand) Ltd. မှ Chief Representative Officer, Mr. Niwat Weeragul တို့မှ လှူဒါန်းမှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်များကို ပြောကြား ကြပါသည်။
ထို့နောက် Yokogawa (Thailand) Ltd. မှ Managing Director ဖြစ်သူ Mr.Prechai Trannitad မှ လှူဒါန်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ပေးအပ်ရာ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းဇော်မှ လက်ခံ ရယူပြီးဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဒုတိယဝန်ကြီးများ နှင့်တာဝန်ရှိသူများသည် ခင်းကျင်းပြသထားသည့် DCS Plant Model ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ ၊ Instrument များကို လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် SMART Measurement & Control Co.,Ltd ၏ မိတ်ဖက် ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Yokogawa Electric Corporation Japan ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်း၍ အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁၅၀၀၀၀)တန်ဖိုးရှိ လုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်ရေး အထောက်အကူပြု DCS Plant Model ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ ၊ Instrument များနှင့် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုနိုင်ရန် ဆက်စပ် သင်တန်းများ အကူအညီပေးအပ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ DCS သည် Computerized Control System ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော Simulation Process Plant ဖြစ်ပြီး Complete range of flowmeters, pressure transmitters , differential pressure transmitters, temperature transmitters , level transmitters and process analyzers လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်း၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ စက္ကူထုတ်လုပ်ရေး၊ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်း၊ သံမဏိနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း စသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီး Industrial Automation ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတနှင့် နည်းပညာများကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။